Muuqaalo la soo bandhigay Cali Xarbi oo loo haysto dilka Xildhibaan Ingiriis ah - Jowhar somali news leader
Kaamirooyinka CCTV ayaa muujinaya ninka la tuhunsan yahay inuu diley xildhibaan ka tirsanaa Baarlamaanka Ingiriiska Cali Xarbi Cali oo maraya waddo ku taal Waqooyiga London saacado uun ka hor inta aan la sheegin inuu tooreey ku dilay xildhibaan Sir David Amess kulan ka dhacay deegaanka Essex.
Fiidiyowgu wuxuu u muuqdaa inuu muujinayo 25-jirkan, oo ay booliisku u hayaan tuhunka dilka Sir David, isagoo si tartiib ah u socda laamiga subaxnimadii Jimcaha isagoo sita boorsada dhabarka iyo jaakadda baarkinka cagaaran iyo muraayadaha indhaha.
Waxaa la fahamsan yahay in muuqaalka laga duubay banaanka dukaanka Highgate Road 8.44am.
Cali, oo ku noolaa dhowr waddo oo ka durugsan, ayaa loo malaynayaa inuu xilligaas u socday saldhigga tareenka ee Gospel Oak.
Booliisku waxay hadda baarayaan dhaqdhaqaaqyada Ali saacadaha ka horreeya weerarka waxayna eegayaan inuu tareen ka raacay Gospel Oak si uu ugu safro Leigh-on-Sea, halkaas oo Sir David uu ku qabanayay kulan kaniisadda Belfairs Methodist.
69-jirka ruug-caddaaga ah ee Tory, oo ah nin katoolik ah oo si weyn u taageersan Brexit oo markii ugu horreysay loo doortay baarlamaanka 1983, ayaa la sheegay in tooreey lagu dhuftay 17 jeer galabnimadii Jimcaha.
Maamulaha dukaanka ayaa Sky News u sheegay in boolisku codsaday in la arko muuqaalka CCTV subaxnimadii Sabtida. Wuxuu sheegay inay si gaar ah u codsadeen in la arko waqti u dhexeeya 8.30am ilaa 9am subaxnimo oo uu ku wareejiyay nuqulka muuqaalka.
Saaxiibadii hore ayaa ku andacooday in ninka looga shakisan yahay dilka Sir David uu noqday mid xagjir ah isagoo daawaday YouTube -ka ee wacdiyihii Anjem Choudary oo booliis iyo MI5 ay sidoo kale eegayaan in Sir David loo doortay taageerada uu u hayo Qadar, oo muran ka taagnayd saamaynteeda Soomaaliya, dalkii uu ku dhashay aabihiina xilal ka soo qabtay.
Baarayaasha hadda waxay rumeysan yihiin inaysan jirin ujeedo gaar ah oo loo bartilmaameedsaday Sir David, iyo in 69-jirkan tooreey lagu dilay maxaa yeelay ninka la sheegay inuu dilay wuxuu ku guuleystay inuu ballansado kulan fool-ka-fool ah oo uu kula yeesho kaniisadda Leigh-on-Sea Jimcihii.
Waxaa maanta shaaca laga qaaday in aabaha tuhmanaha dilka xildhibaanka ay hanjabaad dil ah u direen ururka argagaxisada ee Alshabaab xilli uu ku sugnaa dalka Soomaaliya.
Xarbi Cali Kullane ayaa mar ahaa dhakhtarka isboortiga ee ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ka hor inta uusan u cararin London wax yar ka hor inta uusan curadkiisa Cali ku dhalan Southwark sannadkii 1996. Waxaa sidoo kale ugu dhalatay saddex carruur ah dalka Ingiriiska.
Ilo amni ayaa yiri: ‘Wuxuu si aad ah ugu lug lahaa ka hortagga farriinta al-Shabaab ee ku aaddan xilka agaasime-ku-xigeenka, wuxuuna ka helay hanjabaad dil ah oo ku aaddan arrintaas, taasoo ah wax iska caadi u ah qof kasta oo ku lug leh jago sare oo ka tirsan Dowladda’ .ayaa lagu daabacay wargeyska DailyMail.
Mr Kullane ayaa la sheegay inuu la hadlay booliska la-dagaallanka argagixisada ee Scotland Yard oo ay la socdeen khubaro la shaqeeya MI5 iyo MI6 si ay u falanqeeyaan taleefankiisa si ay u eegaan haddii ay wax sharraxaad ah ka bixinayso ujeedka wiilkiisa ama dhaqdhaqaaqiisa maalmo iyo saacado ka hor inta uusan Xildhibaanka Tory lagu dilay kaniisad Leigh-on-Sea.
Ilo ku dhow dhow baaritaanka ayaa rumeysan in Cali laga yaabo inuu ku fikiray inuu dilo xildhibaanno kale, oo ay ku jiraan siyaasiyiinta Shaqada iyo Tory, ka hor inta uusan dooran Sir David, sida uu qoray The Telegraph.
Mid ka mid ah dadka u dhuun daloola dawladda ayaa u sheegay wargeyska: ‘Nasiib ma lahayn. Lama bartilmaameedsan xisbigiisa siyaasadeed dartiis. David Amess si gaar ah looma bartilmaameedsan. ‘